ဒူဒူကြီး: July 2012
Posted by ကိုထွန်း at 22:263comments:
Posted by ကိုထွန်း at 17:092comments:
ရေနံတင်သဘေ်ာတွေဟာ၊ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ကို အခြေခံတဲ့ crude oil ရေနံစိမ်းမှ၊ octane spirits တွေဖြစ်တဲ့ petroleum products ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေအထိ၊ သယ်ဆောင်ပြီး တနေရာမှ၊ အခြား တနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးကြပါတယ်။ မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် အခြေခံ၊ ရေနံနဲ့ ရေနံထွက်ပစ္စည်း petroleum products တွေကို၊ ရေနံတင်သဘေ်ာရဲ့ tanks တွေ အတွင်းသို့ ပေးသွင်းခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်း၊ ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိစ္စတွေမှာ၊ သတိထားကိုင်တွယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ပြင်ပလေထုအတွင်းမှ အောက်စီဂျင်ဓါတ်ငွေ့နဲ့ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဓါတ်ငွေ့တွေပေါင်းစပ်တဲ့အခါ၊ အလိုအလျှောက် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှု explosion ဖြစ်ပေါါတတ်ပါတယ်။
flammable range ဆိုတာကတော့၊ ရေနံတင်သဘေ်ာရဲ့ cargo tanks တွေအတွင်း၊ မီးလောင်ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ အောက်စီဂျင်ဓါတ်ငွေ့နဲ့ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဓါတ်ငွေ့ပါဝင်မှု အချိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် cargo tanks တွေအတွင်းမှ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဓါတ်ငွေ့ ပါဝင်မှုအချိုးအစားဟာ၊ အနည်းဆုံး minimum ပမာဏအောက်မှာသာရှိနေခဲ့လျှင် ပြင်ပလေထုအတွင်းမှ အောက်စီဂျင်ဓါတ်ငွေ့နဲ့ ပေါင်းစပ်တဲ့အခါ၊ မီးမလောင်နိုင်သလို၊ အများဆုံး maximum ပမာဏအထက်မှာ ရှိနေခဲ့ရင်လည်း၊ မီးမလောင်နိုင်တာကိုတွေ့ရပြီး၊ lower flammable limit နဲ့ upper flammable limit ရယ်လို့ ခေါါဆိုကြပါတယ်။ flammable limit နဲ့ upper flammable limit တွေကို အတိအကျပြောဆို စစ်ဆေးတဲ့အခါ၊ အခက်အခဲရှိတတ်တဲ့အတွက်၊ ယေဘုယျအားဖြင့် (၁) % မှ (၁၀) % အတွင်း သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
Fig. Flammable Triangle
အပေါါမှ graph ရဲ့၊ line "AB" ဟာ၊ tank ထဲမှရှိမယ့်၊ အောက်စီဂျင်ဓါတ်ငွေ့ပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုံးနဲ့ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန်ဓါတ်ငွေ့ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုံးတို့ရဲ့ ဆက်စပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ အမဲရောင် triangle ရဲ့ ညာဖက်မှာရှိနေတဲ့အပိုင်းကို၊ "deadly triangle" လို့ခေါါဆိုပါတယ်။ အမှတ် "A" စတဲ့ ညာဖက်မှ ဒေါင်လိုက်လိုင်းကို ကြည့်ရင်၊ "C" နဲ့ "D" ဆိုတဲ့ lower flammable limit နဲ့ upper flammable limit အမှတ်တွေကို၊ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ် "C" နဲ့ "D" အကြားကတော့၊ flammable range ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ် "C" ရဲ့အောက်ဖက်ဟာ၊ lower flammable range ဖြစ်ပြီး၊ အမှတ် "D" ရဲ့အထက်ကတော့၊ upper flammable range ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုံးကိုလျှော့ချထားတဲ့ "inert gas" ကို၊ ရေနံတင်သဘေ်ာရဲ့ cargo tank အတွင်းသို့ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့အခါ၊ inert gas ပမာဏမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ flammable range ကျဆင်းသွားပါတယ်။ graph မှာ lower flammable range ရဲ့ limit "C" အမှတ်ဟာ၊ "E" ဆိုတဲ့ အမှတ်အထိ၊ ကျဆင်းသွားသလို၊ upper Lower flammable range ရဲ့ limit "D" အမှတ်ဟာလည်း၊ "E" ဆိုတဲ့အမှတ်အထိ ကျဆင်းသွားတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
"AF", "AG", "AE" နဲ့ "FH" အစရှိတဲ့၊ လိုင်းတွေကတော့ inert gas ပေးသွင်းတဲ့အခါ၊ ဟိုက်ဒရိုကာဘွန် ပါဝင်မှုပမာဏ မြင့်တက်လာခြင်းနဲ့ ကျဆင်းသွားခြင်းအခြေအနေတွေကို၊ ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ inert gas ကိုပေးသွင်းလိုက်ခြင်းဖြင့် tank ထဲမှာရှိနေတဲ့၊ ဓါတ်ငွေ့တွေရဲ့ အချိုးအဆဟာ၊ "F" အမှတ်မှာ ရှိနေခဲ့လျှင်၊ flammable range ဟာ၊ ဘေးအန္တရာယ်အကင်းအရှင်းဆုံးအခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့၊ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ inert gas ကို၊ tank အတွင်းမှ လျှော့ထုတ်လိုက်လျှင်၊ "FA" ဆိုတဲ့ လိုင်းဟာ၊ "A" အမှတ်ဆီကို ဆင်းသွားမှာဖြစ်ပြီး၊ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်နဲ့ နီးကပ်လာနိုင်ပါတယ်။ graph မှ၊ အမဲရောင် triangle ရဲ့ ဘယ်ဘက်ကအစိတ်အပိုင်းကို၊ မဖြတ်သန်းပဲ၊ "F" အမှတ်ကနေတဆင့် "H" အမှတ်ကိုဖြတ်သန်းကာ၊ လျှော့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါ၊ မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအန္တရာယ်မှ၊ ကင်းဝေးနိုင်ပါတယ်။
inert gas ကို၊ cargo tank အတွင်းသုိ့ပေးသွင်းခြင်း နဲ့ လျှော့ထုတ်ခြင်းတို့ဖြင့်၊ tank ရဲ့ atmosphere အတွင်းမှ၊ flammable range ကိုအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် dilution သို့မဟုတ် displacement processes ကိုအသုံးချပြီး၊ အလွှာတခုအနေနဲ့ inert gas ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားခြင်း "layering process" လို့ခေါါဆိုနိုင်ပါတယ်။ inert gas ဆိုတာကတော့ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုပမာဏ လျှော့ချထားတဲ့ "flue gas" ဖြစ်ပါတယ်။ IG Plant ဟာ၊ inert gas ကိုထုတ်လုပ်ပေးခြင်း၊ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ inert gas အတွင်း အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှုပမာဏလိုအပ်သလို အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ပေးခြင်းတို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
'gas free' ဆိုတာကတော့၊ tank အတွင်းမှာ normal atmospheric conditions အဖြစ်ရှိနေစေရန်၊ တနည်းအားဖြင့် tank အတွင်းက၊ atmosphere မှာ၊ အောက်စီဂျင်ပါဝင်မှု (၂၁) % သာရှိနေစေရန်ဆောင် ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ 'purging' ကတော့၊ tank အတွင်း ဖြည့်သွင်းထားတဲ့၊ အောက်စီဂျင် ပါဝင်မှုဟာ (၈) % အောက်သို၊့ ရောက်ရှိသွားစေရန်၊ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ cargo tank အတွင်းရှိ၊ atmosphere မှာ၊ positive pressure ရစေဖို့၊ inert gas ဖြည့်သွင်းခြင်းကိုတော့ 'topping-up' လို့ခေါါပါတယ်။ cargo tank တွေအတွင်းသို့ inert gas ဖြည့်သွင်းတဲ့၊ နည်းလမ်း (၂) ခုရှိပြီး၊ "dilution technique" နဲ့ "displacement technique" လို့ခေါါပါတယ်။
Dilution Technique - cargo tank ရဲ့ မူလ atmosphere အတွင်းရှိနေတဲ့ gas တွေနဲ့၊ ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ gas တွေဟာ၊ ညီညွတ်မျှတစွာရောစပ်သွားမှသာ၊ flammable limit ကိုထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားကောင်းတဲ့ blower တွေအသုံးပြုပြီး၊ inert gas တွေကို high velocity ဖြင့် tank အတွင်းသို့ အလုံးအရင်းဖြင့် tank အောက်ခြေအထိ ပေးသွင်းခြင်းကို "dilution technique" လို့ခေါါပါတယ်။ inert gas တွေပေးသွင်းခြင်း inerting အပြင်၊ purging နဲ့ gas-freeing ကိစ္စတွေအတွက်ပါ၊ dilution technique ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ dilution technique အတွက်၊ arrangement (၂) မျိုးတတ်ဆင်အသုံးပြုကြပါတယ်။
Fig. Dilution technique
dilution technique မှာ၊ inert gas ကို cargo tank ရဲ့ အောက်ခြေပိုင်း bottom side မှ၊ ပေးသွင်းပြီး vent line ကိုတော့၊ tank အပေါါမှာတတ်ဆင်ထားပါတယ်။ main deck မှာရှိတဲ့၊ main inert gas line မှတဆင့်၊ ဝင်ရောက်လာမယ့် inert gas ကို၊ tank ရဲ့ cargo line အတွင်းသို့၊ non-return valve တွေခံပြီး ပေးသွင်းပါတယ်။ ဒါ့အပြင် inert gas တွန်းပို့ပေးသွင်းမယ့် blower အပြင်၊ သီးခြား gas freeing blower တွေကို၊ tank တွေမှာတတ်ဆင်ထားလေ့ရှိပါတယ်။ tank မှထွက်လာမယ့် exhaust gas တွေကို၊ tank တခုစီအတွက် သီးခြားတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ vent stack တွေမှတဆင့်၊ ပြင်ပ outside atmosphere သို့ထုတ်ပေးပါတယ်။ တခါတရံ tank တွေမှာ isolating valve တွေခံပြီး၊ main common line ရဲ့ mast riser မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့၊ main vent တွေမှတဆင့် ပြင်ပ outside atmosphere သို့ထုတ်ပေးပါတယ်။
Fig. Displacement technique
Displacement Technique - inert gas ကို cargo tank ရဲ့ အပေါါဖက် top side မှပေးသွင်းပါတယ်။ ပြင်ပ outside atmosphere သို့ tank မှထွက်လာမယ့် exhaust gas တွေထုတ်ပေးဖို့အတွက်၊ vent line ကို၊ tank ရဲ့အောက်ခြေ bottom အထိမြှုတ်နှံကာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ "dilution technique" နဲ့ "displacement technique" တို့မှာ air vent line နဲ့ cargo tank တွေကို ဆက်သွယ်ထားတဲ့ isolating valve တွေဟာ၊ အမြဲတမ်းအဖွင့် normally open အနေအထားမှာ ရှိနေစေဖို့၊ 'positive inter-lock arrangements' တွေတတ်ဆင်ထားရန်လိုအပ် ပါတယ်။ ရေနံတင်သဘေ်ာတွေမှာ၊ inert gas ကို၊ boiler သို့မဟုတ် gas turbine တွေလည်ပတ်ရာမှ၊ ထွက်ရှိလာတဲ့ exhaust gas တွေကတဆင့်ထုတ်ယူပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သီးခြား inert gas generator တွေတတ်ဆင်ပြီး၊ ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
Fig. "Inert gas plant"
"Inert gas plant" တခုမှာ ပါဝင်တဲ့၊ အစိတ်အပိုင်းတွေကတော့ (၁) Exhaust gases source, (၂) Inert gas isolating valve, (၃) Scrubbing tower, (၄) Demister, (၅) Gas Blower, (၆) I.G pressure regulating valve, (၇) Deck seal, (၈) Mechanical non return valve, (၉) Deck isolating valve, (၁၀) Pressure Vacuum (PV) breaker, (၁၁) Cargo tank isolating valves နဲ့ (၁၂) Mast riser တို့ဖြစ်ပါတယ်။
(၁) Exhaust gases source ဟာ inert gas အဖြစ်ပြောင်းလဲအသုံးချမယ့် flue gas ကိုထုတ်ပေးမယ့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ (၂) Inert gas isolating valve ကတော့ system ကို အသုံးပြုတဲ့အခါ၊ ဖွင့်ပေးထားပြီး အသုံးမပြုတဲ့အခါ၊ ပိတ်ထားခြင်းဖြင့် မီးခိုးခေါင်းတိုင် funnel မှ၊ အပြင်လေထု outside atmosphere သို့ exhaust gas စွန့်ထုတ်ခြင်းကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Fig. Scrubbing tower သို့မဟုတ် Scrubber unit
(၃) Scrubbing tower သို့မဟုတ် Scrubber unit ရဲ့ အောက်ခြေမှ၊ ကနေ၊ flue gas တွေကို ဝင်ရောက်စေပါတယ်။ ရေတွေ တဖြန်းဖြန်းကျနေတဲ့၊ baffle plate တွေကို၊ ဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့်၊ flue gas တွေဟာ အေးသွားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ပါဝင်မှုကို (၉၀) % အထိ လျှော့ချပေး လိုက်တာကြောင့်၊ flue gas တွေထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ soot တွေကုန်စင်သွားပါတယ်။ (၄) Demister ကို polypropylene ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၊ scrubber unit မှထွက်ရှိလာတဲ့ gas တွေမှာ ပါဝင်နေတဲ့၊ ရေ နဲ့ ရေခိုးရေငွေ့တွေကို စုတ်ယူဖယ်ရှားပေးပါတယ်။
(၅) Gas Blower တွေကို၊ steam driven turbine blower နဲ့ electrically driven blower ရယ်လို့၊ (၂) မျိုးတွေ့ရပြီး၊ ရေနံတင်သဘေ်ာကြီးတွေမှာ steam driven turbine blower တွေကို အသုံးပြုပြီး၊ ရေနံတင်သဘေ်ာ အသေးတွေမှာတော့ electrically driven blower တွေကို၊ အသုံးပြုပါတယ်။ (၆) I.G pressure regulating valve ကို blower ရဲ့ discharge line မှာ တတ်ဆင်ထားပါတယ်။ cargo tank ထဲမှာ၊ ရှိနေတဲ့ ရေနံနဲ့ ရေနံထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိပေါါ မူတည်ပြီး၊ atmospheric pressure ဟာပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။ pressure မြင့်တက်လာတဲ့အခါ၊ လျှော့ချဖို့နဲ့ blower fan မှာ၊ over heat မဖြစ်စေဖို့၊ pressure regulating valve မှဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပိုလျှံနေတဲ့ excess gas တွေကို၊ re-circulate လုပ်ရန်၊ scrubber unit သို့ပြန်လည် ပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
(၇) Deck seal ကတော့၊ inert gas တွေ blower ဖက်သို့ back flow အဖြစ်ပြန်လည်စီးဆင်းမသွားစေရန်၊ တားဆီးပေးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် wet type deck seals တွေအသုံးပြုကြပြီး၊ demister ကိုပါ တတ်ဆင်ထားလေ့ရှိကြပါတယ်။ (၈) Mechanical non return valve ကို၊ deck seal unit ရဲ့အထွက် line မှာတတ်ဆင်ပြီး၊ inert gas တွေ blower ဖက်ကိုပြန်စီးဆင်းမသွားစေရန်၊ ထပ်မံတားဆီးထားပါတယ်။ (၉) အကယ်၍၊ အကြောင်းတခုခုကြောင့် engine room မှာရှိတဲ့ inert gas isolating valve ဟာ၊ operate မလုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အခါမျိုးမှာ၊ system ကိုပိတ်ထားနိုင်ရန်၊ Deck isolating valve ကို အရံအဖြစ် တတ်ဆင်ထားပါတယ်။
Fig. PV valve
(၁၀) Pressure Vacuum (PV) breaker ဆိုတဲ့ PV valve တွေဟာ၊ cargo tank တွေအတွင်း၊ under pressurization နဲ့ over pressurization condition အခြေအနေ မဖြစ်ပေါါစေရန်ထိန်းညှိပေးပါတယ်။ flame trap တွေ တတ်ဆင်ထားတဲ့အတွက်၊ အကြောင်းတစုံတခုကြောင့် ignite ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း၊ မီး မလောင်စေရန်တားဆီးပေးပါတယ်။ (၁၁) Cargo tank isolating valves တွေကို၊ tank တိုင်းမှာ တတ်ဆင်ထားပြီး၊ IG gas ထည့်သွင်းခြင်းနဲ့ သိုလှောင်ခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုပါတယ်။ (၁၂) Mast riser ကတော့ ကုန်တင်နေစဉ်၊ tank တွေထဲမှာ၊ pressurization မဖြစ်ပေါါစေဖို့နဲ့၊ ဖြည့်သွင်းထားတဲ့ inert gas ရဲ့ positive pressure ကိုထိမ်းသိမ်းပေးခြင်းတို့ကို၊ ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Reference and Image Credits to : International Maritime Organization. ISBN 92-801-1262-7, http://www.arb.ca.gov, http://seagoing.narod.ru, http://www.tc.gc.ca
Posted by ကိုထွန်း at 07:36 No comments:
Posted by ဒူဒူကြီး at 16:41 No comments:
Posted by ကိုထွန်း at 04:10 1 comment:
Posted by ကိုထွန်း at 04:31 1 comment:
Posted by ဒူဒူကြီး at 21:04 No comments: